Gannett dia mila mamoaka ny lohany hiala amin'ny bokotra | Martech Zone
Mila mamoaka ny lohany hiala amin'ny vodiny i Gannett
Alahady, Aogositra 12, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Samy efa naheno ny fomba fiteny ny rehetra ambony loha ny lohanao. miaraka Gannett, tena nitondra ny fomba fiteny tokoa izy ireo, na izany aza. Ruth Holladay dia mpamaham-bolongana manesoeso amin'ny lela maranitra… ary maty tampoka izy, indrindra rehefa tonga any Gannett ary ny Kintana Indianapolis.
Samy niasa teo izahay roa, nisotro ronono tamin'ny famoahana lahatsoratra i Ruth ary niaraka tamiko rehefa nitondra VP i Gannett izay nanadio ny talenta talenta iray manontolo.
Ny tsaho vao haingana dia izany Gannett dia mety miomana hivarotra tsy ho ela. Tsy miraharaha izany aho. Namidiko ny tahiriko raha vantany vao lasa aho, fantatro fa famantarana ny iray hafa ny fialako Monsterus Corporititus, fantatra ihany koa amin'ny ambony loha ny lohanao.
Fiainana voalohany: Niasa tamina fikambanana Gazety roa aho - Landmark ary Gannett. Na dia nitovy tamin'ny indostria aza ireo orinasa roa ireo dia tsy afaka niavaka tamin'ny fitantanana izy ireo. Raha i Landmark dia mino ny fizakan-tena noho ny fananany sy ny mpitantana azy, i Gannett kosa mino ny fanaraha-maso.
Amin'ny maha-Dateter Marketer ahy tao amin'ny gazety Gannett dia nanana fifaninanana tany amin'ny faritra sy ny orinasa aho. Tsy miharihary ivelany izany ary nanana fifandraisana tsara tamin'ny orinasa aho - saingy ny zava-misy dia mba hahafahan'izy ireo mahita fahombiazana, dia voatery namoaka ahy tamin'ny orinasa izy ireo. Arakaraka ny ahafahan'ny orinasa manaporofo ny maha-zava-dehibe azy amin'ny fampiroboroboana ny paikadin'ny orinasa, dia vao mainka betsaka ny mpiasa azony esorina amin'ny gazety eo an-toerana. Miankina aminy ny fivelomany, ny bonus ary ny fampiroboroboana azy ireo. Noho izany, na dia mety nanana traikefa bebe kokoa aza aho ary mpanao tsara kokoa - izany karazana fampahalalana izany dia tokony hohamaivanina tao McLean, Virginia.
Gannett dia manao izany manerana ny sampana rehetra, indrindra amin'ny Editorial. Ny tombony tokana mifaninana lehibe indrindra ananan'ny gazety an-tserasera sy ny loharanom-baovao hafa dia ny talentany eo an-toerana. Ireo no olona namorona fifandraisana eo amin'ny fiarahamonina ary mahalala hoe aiza ny triatra sy ny ahiahy raha ny amin'ny fitarihana olom-pirenena. Ilay departemanta ihany koa no toa mahafoy tena betsaka. Ireo olona namako tao amin'ny Editorial dia niasa andro aman'alina tamin'ny vodiny malalaka izay tsy ho fenoina mihitsy. Betsaka amin'izy ireo no efa lasa… fatiantoka lehibe ho an'ity tanàna ity.
Mora ny mahita ny toerana alehan'ny tombom-barotra:
Ny Indianapolis Star dia mifangaro AP sy dokam-barotra miaraka amin'ny famafazana tatitra eo an-toerana eo anelanelany. Hilaza aminao ny manam-pahaizana momba ny indostria fa nilaina ireny fanapahana ireny satria nitodika tany amin'ny Internet ny olona noho ny vaovao sy ny mombamomba azy.
Tsy azoko lazaina amin'ny fomba mahasosotra ahy izany. Tahaka ny fanamelohana an'i Toyota amin'ny tsy fahombiazan'ny varotra amin'ny fiara-mandeha an-toerana. Ireo mpiasan'ny orinasa Gannett dia tsy misy omena tsiny afa-tsy ny tenany ihany. Nanam-potoana izy ireo hitrandraka ny toerany matanjaka eo amin'ny fiarahamonina ary hampiasa izany ho an'ny dokambarotra sy ny lahatsoratra. Fa kosa nataon'izy ireo hamela ny fanaraha-maso ny orinasa ny gazety eo an-toerana.
Ny fijerena ny The Indianapolis Star mifanohitra amin'i Gannett dia hanome porofo miharihary amin'ny fomba fiasa.
Raha nahazo loka i Gannett tamin'ny iray amin'ireo foiben'ny orinasa tsy mampino eto amin'ny firenena, The Indianapolis Star dia azo nifidy ho iray amin'ireo ratsy indrindra eto an-tanàna. Niasa tamina trano iray niraikitra aho, ny American Building… izay honohono fa honenana ivelan'ny gorodona voalohany. Tsapako fa tsy izany ny olana, fahitana azy tsara fotsiny io.
Hita fa mizaka ny tombom-barotra amin'ny alàlan'ny fanoherana sy fatiantoka mivezivezy. Eo an-toerana, ny Star dia manohy manampy ny famoahana azy miaraka amin'ny sary sy lahatsoratra bilaogy avy amin'ny mpamaky azy. Na dia tsy mino aho fa fanapahan-kevitra lehibe momba ny raharaham-barotra ity, mampalahelo ny mahita ny tahiry atosika any amin'ny orinasa fa tsy ampanjifaina amin'ny talenta eo an-toerana.
IndyMoms: Fahombiazana eo an-toerana
IndyMoms dia ohatra iray amin'ny fomba fanaovana zavatra tsara. IndyMoms 'General Manager dia Jennifer Gombach, vehivavy manana talenta mahafinaritra izay nahafinaritra ahy ny niara-niasa tamiko tao amin'ny The Star.
I Jennifer dia tsy mpivarotra, mpanoratra ary mpandraharaha manan-talenta fotsiny, fa eo an-toerana ihany koa ary efa niaraka tamin'ny gazety nandritra ny fotoana ela (ary matetika no tsy jerena). Tiako ny nanararaotra niasa tamin'ny alàlan'i Jennifer raha mbola teo aho. Mpampianatra tsara sy namana tsara izy.
Inona no tokony hataon'i Gannett
Raha tena te-hanala an'io i Gannett dia mila manomboka amin'ireo mpiasan'ny orinasany manokana ny fandroahana. Miala tsiny amin'ireo namako sy mpiara-miasa amiko mialoha aho, fa eto no mipetraka ny olanao.
Omeo ny gazety miankina anao ny fizakantena ilain'izy ireo hanohanana ny orinasa. Avelao izy ireo 'hampiasa vola' amin'ny orinasan-dry zareo fa ampamoahina. Ny famatsiam-bola dia mila manapaka ny taha tombony azon'izy ireo izay tian'izy ireo tany amin'ny foibe fa ilaina izany. Atombohy ny fampiroboroboana avy ao anaty gazety fa tsy ny fahaizan'ny talenta manerana ny firenena.
Topazo maso ny zavatra nataon'i Jennifer tamin'ny IndyMoms. Eo an-toerana izy io, an'ny tena manokana ary mahafinaritra. Nifandray tamin'ny mpamaky izy ireo ary nanolotra fampitaovana tonga lafatra ho an'ireo mpanao dokambarotra eo an-toerana mba hifandray amin'ny demografika eo an-toerana. Io no fomba fahandro tonga lafatra hahombiazana ary azo averina imbetsaka.
Mila mamoaka ny lohany amin'ny vodiny i Gannett. Hoy ny olona sasany An-toerana daholo ny politika! Ao amin'ny indostrian'ny gazety, Ny dolara rehetra dia eo an-toerana! Tsy tazoniko ny fofonaiko miandry an'i Gannett hitifitra ny tenany, na izany aza.
SQL: Fikarohana anarana feno ho an'ny fanjakana sy faritany ho an'i Etazonia sy Kanada
Martech Zone dia ao amin'ny Blogs 50 an-taonan'ny Advertising Age